Developer Conference 2011 ကျင်းပရေးအကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်
Submitted by zwintun on Fri, 03/18/2011 - 16:32
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA)မှ ကြီးမှူးပြီး Developer Conference 2011 ကို ကွန်ပျူတာပညာရှင် များအတွင်း IT အသိပညာဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် အသိပညာများကိုဖလှယ်ရန်၊ IT အသုံးချ Software ကောင်းများ တီထွင် နိုင်သည့် Developer များပေါ်ထွက်လာစေရန်၊ ICT Developer ဖြစ်လိုသူများအတွက်နည်းလမ်းကောင်းများ ချမှတ်ပေးနိုင်ရေး တို့ကို ရည်ရွယ်၍ကျင်းပခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၁၊ မတ်လ(၂၅)ရက် သောကြာနေ့၊ ညနေ(၄)နာရီမှ (၆)နာရီအထိ မြန်မာအင်ဖိုတက် အခန်း(၂၀၅)တွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။
Developer Conference 2011 ကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် IT ပညာရှင်များ၊ MCPA အသင်းဝင်များနှင့် IT စိတ်ဝင်စားသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါသဖြင့် အကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်နိုင်ပါကြောင်းလေးစားစွာ ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း ဖုန်း- ၆၅၂၂၇၆ ၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
နေ့ရက် : ၂၅.၃.၂၀၁၁ (သောကြာနေ့)
အချိန် : နေ့လည် (၄:၀၀ - ၆:၀၀)နာရီ
နေရာ : အခန်း(၂၀၅)၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ။
Read more about Developer Conference 2011 ကျင်းပရေးအကြိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမည်
Myanmar Computer Professionals Association issue official appology to Ko Ngwe Tun and Myanmar Unicode Dev Community
Submitted by zwintun on Thu, 12/30/2010 - 22:02
Myanmar Computer Professionals Association would like publicly apologise Ko Ngwe Tun and Myanmar Unicode Development Community for our biases towards Zawgyi Font by giving MCPA award. We only did it because many of our EC members are Zawgyi fans (we don't know any better) and we just want to paddle our shits and see how far we can get away with it ;-)
It is no secret that we, MCPA ECs, have been unfairly promoting Zawgyi Font as standard foralong time and we have been doing everything we can to hamper Unicode Development from moving forward.
We also mislead Myanmar Community by spreading rumours that Zawgyi was filling the gap.
We, Ye Yint Win, Tun Khine, Maung Maung Thant, Thuang Su Nyein, Ye Myat Thu and Nyi Lynn Seck, collectively accept our socially irresponsible actions. Sorry, we have been very very naughty!
Ko Ngwe Tun - we, MCPA, officially announce that we were wrong to give MCPA Award Zaw Gyi and we promise here and now, in public, that we will never try to pull this kind of stunt again. I hope you would accept our apologies.
Read more about Myanmar Computer Professionals Association issue official appology to Ko Ngwe Tun and Myanmar Unicode Dev Community
“The Architecture Overview of Yahoo! Mail System” ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
Submitted by zwintun on Sun, 12/26/2010 - 14:17
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ ICT နည်းပညာ ပြန့်ပွားရန်၊ ခေတ်မီ နည်းပညာရပ်များ လေ့လာမှု အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်ရန် ရည်ရွယ်၍ Yahoo! Mail System ၏ တည်ဆောက်ပုံ သဘောတရားများ နှင့် အခြေခံ နည်းပညာ သဘောတရားများ၊ Infrastructure, Deployment နှင့် Monitoring အကြောင်းများကို ဗဟုသုတ ရရှိ သိကြားစေရန် ဒီဇင်ဘာလ (၃၀)ရက် (ကြာသပတေးနေ့) နေ့လည် (၂း၀၀)နာရီ မှ (၄း၀၀)နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ ပင်မဆောင်ရှိ အခန်း(၂၀၅)တွင် YAHOO! Internet Industry (San Francisco Bay Area, - Yahoo.com) ၏ Principal Software Engineer ဦးစန်းဝေဦး မှ ၅နှစ်ကျော် Yahoo.com မှ အတွေ့အကြုံများကို “The Architecture Overview of Yahoo! Mail System” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲသို့ အထူးသဖြင့် ICT လေ့လာဆည်းပူနေသော ကျောင်းသားလူငယ်များနှင့် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်နေသော Software Engineer များ၊ Network Engineer များ၊ ကွန်ပျူတာပညာရှင် အသင်းဝင်များနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက် လေ့လာ ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာ ပညာရှင် အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊ Website – www.mcpamyanmar.org ၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၆၅၂၂၇၆ ၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်သည်။
Topic: The Architecture Overview of Yahoo Mail System
Date: 30th December 2010, 2-4pm
Venue: Room 205, Myanmar Info-Tech
Speaker: U San Wai Oo, Principal Software Engineer, Yahoo!
Read more about “The Architecture Overview of Yahoo! Mail System” ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT-Laboratory “Database Mirroring with SQL server 2005” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Tue, 12/14/2010 - 00:03
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့ လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးဇော်မိုးသန့် (ACE Data Systems) မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ရက်တွင် နေ့လည် ၁းဝဝ နာရီမှ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Database Mirroring with SQL server 2005 ” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့သရုပ်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ Business Applications များတွင် တွင်ကျယ် စွာအသုံးပြုနေကြသော SQL Server 2005 အားအသုံးပြု၍ High Availability Solution တစ်ခုဖြစ်သော Database Mirroring အားစမ်းသပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Database Applications များရေးသားခြင်းကို လေ့လာနေသူများ၊ Database Administrator များအနေဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်သင့်သော အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ MCPA စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများနှင့် စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ရောက်လေ့ကျင့်နိုင်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ ညနေ (၃းဝဝ) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်သူ (၂၄) ဦး လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင် (၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း ICT-Laboratory “Database Mirroring with SQL server 2005” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
မြန် မာ နိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) မှ ITPEC ( FE and IT Passport ) အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်
Submitted by zwintun on Mon, 12/13/2010 - 23:37
Read more about မြန် မာ နိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) မှ ITPEC ( FE and IT Passport ) အောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်
ICT-Laboratory “Practical on Wireless Network Installation, Configuration”လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Mon, 12/06/2010 - 14:43
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့ လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်များဖြစ်ကြသော ဦးအောင်စိုးမိုး၊ ဦးအောင်ဇော်မြင့်၊ ဦးဇော်ဝင်းထွန်း၊ ဦးရဲကျော်သိန်း တို့မှ ဒီဇင်ဘာလ (၁၂) ရက်တွင် နေ့လည် ၁းဝဝ နာရီမှ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Practical on Wireless Network Installation , Configuration” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့ သရုပ်ပြ သွားမည်ဖြစ်သည်။ Myanmar Info-Tech ဝင်းအတွင်းရှိ အဆောက်အဦးနှစ်ခုအား 8-dbi Outdoor Wireless Antenna များအသုံးပြု၍ ကွန်ပျူတာကွန်ယက်လက်တွေ့ချိတ်ဆက်ခြင်းများကို စမ်းသပ်ပြုလုပ်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ MCPA စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများနှင့် Network အခြေခံတတ် မြောက်ထားသူများ၊ Routing နှင့် Switching့ စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ရောက်လေ့ကျင့်နိုင်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့ ညနေ (၃းဝဝ) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်သူ (၂၄) ဦး လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင် (၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about ICT-Laboratory “Practical on Wireless Network Installation, Configuration”လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
ICT-Laboratory “Java Script and XML” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Thu, 11/25/2010 - 16:08
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့လေ့လာ မှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဒီဇင်ဘာလ (၄) ရက်တွင် နေ့လည် ၁းဝဝ နာရီမှ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Java Script and XML” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းမှ အလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်အောင် မှ လက်တွေ့သရုပ်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ MCPA စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများနှင့် Computer Program ပညာ လေ့လာနေသူများ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ရောက်လေ့ကျင့်နိုင်ပြီး ဒီဇင်ဘာလ (၃) ရက်နေ့ ညနေ (၃းဝဝ) နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်သူ (၂၄) ဦး လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာ အင်ဖိုတက်ခ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင် (၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about ICT-Laboratory “Java Script and XML” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
ICT-Laboratory “Ethernet Over Power Line” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Mon, 01/10/2011 - 16:11
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့ လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်များဖြစ်ကြသော ဦးအောင်စိုးမိုး၊ ဦးရဲကျော်သိန်း၊ ဦးအောင်ဇော်မြင့်၊ ဦးဇော်ဝင်းထွန်း၊ တို့မှ ဇန်နဝါရီလ (၂၂) ရက်တွင် နေ့လည် ၁းဝဝ နာရီမှ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Ethernet Over Power Line” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့ သရုပ်ပြ သွားမည်ဖြစ်သည်။ Myanmar Info-Tech ဝင်းအတွင်းရှိ အဆောင်(၁) တွင် Wireless Devices များ၊ LAN ကြိုးများ အသုံးမပြုပဲ အဆောက်အဦအတွင်းရှိ မီးလိုင်းများကိုသာ အသုံး ပြုပြီး ကွန်ပျူတာများအား လက်တွေ့ချိတ်ဆက် စမ်းသပ်ကြမည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ MCPA စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများနှင့် Network အခြေခံတတ် မြောက်ထားသူများ၊ စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ရောက်လေ့ကျင့်နိုင်ပြီး ဇန်နဝါရီလ (၂၁) ရက်နေ့ ညနေ (၃းဝဝ) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်သူ (၂၄) ဦး လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင် (၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about ICT-Laboratory “Ethernet Over Power Line” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း “Internet Resource Management Essentials” ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
Submitted by zwintun on Tue, 10/19/2010 - 20:25
သတင်းအချက်အလက် နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းမှ ကြီးမှူး၍ Domain Name Server Security နှင့် Internet Routing ဆိုင်ရာ နည်းပညာအသစ်များကို သိရှိလာစေရန်နှင့် အသုံးပြုတတ်စေရန် ရည်ရွယ်၍ အောက်တိုဘာလ (၂၇) ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) နံနက် (၉းဝဝ) နာရီမှ (၁၂းဝဝ) နာရီအထိ ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်၊ ပင်မဆောင်ရှိ အခန်း (၂ဝ၅) တွင် Australia နိုင်ငံ Asia Pacific Network Information Center (APNIC) မှ Mr. Vithanage Champika Wijayatunga နှင့် Mr. Jeffrey Leander Tosco တို့မှ “Internet Resource Management Essentials” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရှင်းလင်းဟောပြောမည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးဟောပြောပွဲသို့ Network Engineer များ၊ System Administrator များ၊ Internet/ Network နှင့် ပတ်သက်၍ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများ၊ DNS Security နှင့် Internet Routing ဆိုင်ရာ နည်းပညာများကို စိတ်ဝင်စားသူ မည်သူမဆို (အခမဲ့) တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာ ပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင်(၄)၊ အခန်း(၄)၊ Website- www.mcpamyanmar.org ၊ ဖုန်းနံပါတ်-၆၅၂၂၇၆၊ ၇၃၀၈၈၃၀၀ သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း “Internet Resource Management Essentials” ဟောပြောပွဲကျင်းပမည်
MCPA ICT- Laboratory မှ “Cisco Network Devices” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်
Submitted by zwintun on Tue, 10/05/2010 - 22:46
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း (MCPA) သည် အသင်းသားများ၏ ICT ပညာရပ်ဆိုင်ရာ လက်တွေ့ လေ့လာမှုများအား အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် လစဉ် LAB Schedule များရေးဆွဲ၍ လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်း အလုပ်အမှုဆောင်များဖြစ်ကြသော ဦးအောင်စိုးမိုး၊ ဦးအောင်ဇော်မြင့်၊ ဦးဇော်ဝင်းထွန်း၊ ဦးရဲကျော်သိန်း တို့မှ အောက်တိုဘာလ (16) ရက်တွင် နေ့လည် ၁းဝဝ နာရီမှ ၅းဝဝ နာရီအထိ “Cisco Network Devices” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့သရုပ်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းဝင်များ၊ MCPA စာမေးပွဲအောင်မြင်ထားသူများ နှင့် Network အခြေခံ တတ်မြောက်ထားသူများ Routing နှင့် Switching စိတ်ပါဝင်စားသူမည်သူမဆို တက်ရောက်လေ့ကျင့်နိုင်ပြီး အောက်တိုဘာလ (၈) ရက်နေ့ ညနေ (၃းဝဝ) နာရီနောက်ဆုံးထား၍ စာရင်းပေးသွင်းနိုင်သည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်သူ (၂၄) ဦး လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာပညာရှင်အသင်းရုံးခန်း၊ အဆောင် (၄)၊ အခန်း(၄)၊ ဖုန်း-၆၅၂၂၇၆ သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်သည်။
Read more about MCPA ICT- Laboratory မှ “Cisco Network Devices” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြုလုပ်မည်